JMJ Mahajanga : Maherin’ny 3 alina ireo mpandray anjara -
AccueilSosialyJMJ Mahajanga : Maherin’ny 3 alina ireo mpandray anjara
08/10/2018 admintriatra Sosialy 0
Manomboka androany 8 oktobra, any Mahajanga ny andro iraisam-pirenena lehibe ho an’ny Tanora na ny JMJ, andiany faha-9. Tsy isika eto Madagasikara irery no mankalaza izany fa manerantany fa ho an’i Madagasikara, dia Mahajanga no nosafidiana hanaovana izany tamin’ity taona 2018 ity. Eo amin’ny herinandro latsaka kely ny faharetana, satria amin’ny 14 oktobra ho avy izao no mifarana izany. Efa tonga any an-toerana avokoa ireo mpandray anjara rehetra amin’izao fotoana izao, izay tanora maherin’ny telo alina, sy mpino katolika avy amin’ny diosezy 22 manerana ny Nosy. Hitsinjara amin’ny toby miisa 14 ireo mpizaika. Lohahevitra amin’ity ny hoe, “Aza matahotra ry Maria fa sitraka Andriamanitra ianao”, Md Lioka 1-33.
Fivahinianana masina, vavaka fandinihan-tena ary fandalinam-pinoana no hanompanana ny fotoana mandritra io herinandro io. Fitaovana tsara tokony hararaotin’ny tanora ho amin’ny fiainam-pinoana sy ny kristianina rehetra ihany koa io fotoana io. Nomarihan’ny Ray am-panahy ny diosezin’i Mahajanga, Mompera Rasolonomenjanahary Herman, fa tsy zaika be, na fety na koa fitsangatsanganana, na fizahantany ny JMJ fa fanehoam-pinoana ho an’ny tanora amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fandalinam-pinoana. Ho an’ny diosezin’i Mahajanga manokana izay mandray ny andron’ny tanora sy ny mpino katolika ity, nisy ny fepetra noraisina mba hampizotra tsara ity JMJ andiany faha-9 ity. Nisy araka izany ny fiaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana, dia ny OMC, ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny toeram-pisakafoanana. Tsy maintsy mitondra “badge” misy anarana ihany avokoa ireo mpizaika rehetra mba tsy hisian’ny olona hafa tsy voasoratra mitsofoka anatin’ny JMJ. Marihina fa tamin’ny 8 aogositra 1998 no nisian’ny JMJ voalohany teto Madagasikara, izay ny diosezin’ny Mahajanga no nandray izany voalohany.